> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ ozi na HTC EVO 4G
Enwere ụzọ naghachi ehichapụ ozi na ihe HTC EVO 4G?
N'ozuzu, ọtụtụ ndị na-ele na ozugbo ozi na-ehichapụ si gị HTC EVO 4G, e nweghị ụzọ iji nweta ha azụ. Ka a okwu nke eziokwu, ha na-ezighị ezi. Ọ bụ omume maka a data mgbake ngwá ọrụ na-agbake ha ma ọ bụrụ ebe ebe ehichapụ ozi echekwara na mbụ na-adịghị overwritten. Ọ pụrụ iyi ihe na a obere ike ịghọta, ma ọ dịghị mkpa. Ị naanị mkpa nke a n'uche: kwụsị iji ekwentị gị mgbe ị ga-esi gị ozi furu efu (n'agbanyeghị ihe ị na-eme na ekwentị gị, o nwere ike n'ịwa ọhụrụ data, nke nwere ike ime ka gị na furu efu data unrecoverable.). Mgbe ahụ a ozi mgbake ngwá ọrụ maka HTC EVO 4G igwe ASAP iji weghachite gị furu efu ozi.
Olee otú naghachi furu efu ozi na HTC EVO 4G igwe
Firstly, na-a nri data mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery)
Nke a Wondershare Dr.Fone for Android software-enyere gị iji weghachite data dị ka ozi, kọntaktị, photos, videos, ọdịyo na akwụkwọ na gị HTC EVO 4G. Ruru ka mfe ihu, i nwere ike rụchaa dum mgbake usoro na naanị 3 nzọụkwụ na-enweghị hassles. E wezụga HTC EVO 4G, ọ arụ ọrụ zuru okè na ọtụtụ ndị ọzọ Android ntị na mbadamba si Samsung, Google, Sony, LG, Motorola, na ndị ọzọ. Gịnị mere enweghị a-agbalị ego ya ugbu a?
Na mmalite, nanị Ugboro abụọ pịa akara ngosi na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone for Android mgbe ị na arụnyere na ya na kọmputa gị. Mmalite window nke Ọ ga-gosiri dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 1. Mee ekwentị gị na USB debugging mode
Tupu ị jikọọ ekwentị gị na ike iṅomi ya, ị chọrọ ka ya na USB debugging mode.
Mee USB debugging on HTC EVO 4G: Ntọala <Mmepụta nhọrọ <USB debugging
Mgbe ị na-ahụ USB debugging, ego ya. Mgbe ahụ ekwentị gị bụ na USB debugging mode ugbu a.
Nzọụkwụ 2. Ina ekwentị gị ejikọrọ na ike iṅomi ya
Ugbu a, i ike ijikọ ekwentị gị na kọmputa. Mgbe ọ na-ahụrụ site Wondershare Dr.Fone for Android, ị ga-ahụ na windo dị ka ndị a.
Mgbe ị na rutere ebe a, ị nwere ike pịa Malite bọtịnụ na-amalite ịgụ isiokwu ekwentị gị ugbu a. Otu ihe dị mkpa ka ị ntị bụ na-eme n'aka batrị bụ karịa 20% ebubo, nke mere na ọ pụrụ ịkwado dum usoro scanning-agbake.
Nzọụkwụ 3. Naghachi ehichapụ ozi na gị HTC EVO 4G
Oge nke scanning bụ dabere na ego nke data echekwara na ekwentị gị, yana idobe okirikiri nke niile ẹdude na-ehichapụ ihe. Ozugbo ọ dechara, ị ga-ahụ a Doppler N'ihi na ihe omume ahụ site na-enye. Ịnwere ike ihuchalu recoverable data n'ebe ahụ, na-ahọrọ ihe ọ bụla ị chọrọ. N'ihi ehichapụ ozi, họrọ Izi ozi nhọrọ na i nwere ike ịgụ ha otu otu n'ihu mgbake. Mgbe ahụ, pịa Naghachi na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Download Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) na-enye ya a na-agbalị ugbu a!
Olee otú iji weghachite ehichapụ ozi na HTC Wildfire
Olee otú iji tọghata RA ka MP3 maka Google Music
Olee otú Ekekọrịta Google Music on Google+